Songs banyere Ezinụlọ - Songs Aro Maka Family Reunion
> Resource> Music> Songs Aro Maka Family Reunion
Ọ dịghị ezinụlọ njikọghachi ga-ezu na-enweghị music na-ekwu okwu ka obi banyere ezinụlọ, nganga na n'otu. Music nwere ike ịtọ ọnọdụ mgbe ọ bụla nzukọ, gụnyere ezinụlọ reunions, agbamakwụkwọ, na klas reunions, ma ọ bụ ihe ọ bụla omume ị na-ịga ọzọ. Iji nyere aka agaghịkwa gị ọzọ mere elu a notch, anyị na-na weere a ndepụta nke anyị họpụta mmadụ maka ezinụlọ njikọghachi songs. Gee ntị songs ma na-enwe ọnọdụ. I nwekwara ike iji ha na-eme ka a ngosi mmịfe ọnụ na foto, na videos maka agbamakwụkwọ, ụbọchị ọmụmụ, ma ọ bụ ezinụlọ njikọghachi ọrụ.
Part 1: The oké ndepụta nke ezinụlọ songs maka ngosi mmịfe eme
Part 2: Download niile music n'elu free na TunesGo
Part 3: Ebe ahụ ezinụlọ songs na weebụ
Part 4: Olee otú ibudata ezinụlọ songs maka ngosi mmịfe eme
Part 5: Olee otú ime ka slideshows na ebudatara ezinụlọ songs
Part 1: The oké ndepụta nke ezinụlọ songs maka ngosi mmịfe Ndinam
Ebe a bụ oké ndepụta nke ezinụlọ songs na i nwere ike na-enwe. Ndị a niile ezinụlọ songs na-nlezianya họrọ na ị ga-ahụ ihe dị gị mkpa.
1. Anyị bụ ndị ezinụlọ - Sister-adọkpụ
Naịl Rodgers, Bernard Edwards
Disko, mkpụrụ obi, R & B
Sister-adọkpụ bụ ihe American òtù egwú si Philadelphia, Pennsylvania. Kpụrụ na 1971, ìgwè ahụ na mbụ esịnede nwanyị Debbie, Joni, Kathy na Kim na-adọkpụ. Na Kathy ahapụ na 1989, otu na ebe ọ bụ na ejikwara dị ka a Na.
2. Ndị ahụ bụ The Days - Mary Hopkin
Mary Hopkin, otoro na ụfọdụ na tepụ ka Mary Visconti, bụ Welsh ndiife na-agụ egwú a kasị mara maka ya 1968 UK nọmba otu otu "Ndị ahụ bụ The Days". Ọ bụ otu n'ime ndị mbụ egwú banye ka beatles 'Apple labeelu.
3. WTF ụzọ nke ụwa - Nejee
Mkpụrụ obi, Funk
Nejee bụ na-akụ egwú na-na-ebe mara maka album Nke ahụ bụ ụzọ nke ụwa.
4. Kụziere Ụmụ Gị - Crosby Stills Nash
Country nkume, ndiife nkume
Crosby, Stills & Nash bụ a ndiife nkume supergroup mejupụtara David Crosby, Stephen Stills na Graham Nash. Ha na-mara dị ka Crosby, Stills, Nash &-eto eto mgbe sonyeere mgbe ụfọdụ anọ so Neil Young.
5. Noua ihe - mmaji amuma
Mmaji amụma bụ na-akụ egwú na-na-ebe mara maka ya track Noua.
6. Noua - DJ Jazzy Jeff
G-Funk, ọhụrụ Jack siwing, Hip iwuli elu, R & B
Jeffrey Allen Townes, makwaara dị ka DJ Jazzy Jeff ma ọ bụ nanị Jazz, bụ ihe American hip iwuli elu na R & B diski jockey, ndekọ-emeputa, turntablist na omee onye na-kasị mara maka ya n'oge ọrụ na Will Smith dị ka DJ Jazzy Jeff & The Ọhụrụ Prince.
7. A Song N'ihi Mama - Boyz 2 Ndị mmadụ
8. Lee ihe na Ịhụnanya Pụrụ Ime - Eric Clapton
Rock, pop nkume, ike nkume
Eric Patrick Clapton, CBE, bụ ihe English oké nkume na Bad guitarist, na-agụ egwú na songwriter. Ọ bụ ya bụ nanị atọ oge inductee ruo Oké Nkume na Roll Ụlọ Nzukọ nke Maara Aha: otu ugboro ka a solo ọgụ egwu na iche iche dị ka onye so na Yardbirds na ude.
9. My Nne Anya - Bette Midler
Bette Midler, a makwaara ya n'ịgba ogbo aha The Divine Miss M, bụ ihe American na-agụ egwú, songwriter, omee, ome nto ochi, na film emeputa ihe.
10. My n'obodo - Bruce Springsteen
Bruce Frederick Joseph Springsteen bụ ihe American egwú, na-agụ egwú, songwriter na akwalite ọdịmma ndị mmadụ. Ọ na-kasị mara maka ya ọrụ na ya E Street Band.
11. Ịhụnanya na Happines - Al Green
Albert "Al" Greene, mgbe mgbe maara dị ka The Reverend Al Green, bụ ihe American na-agụ egwú a kasị mara maka Ndekọ a usoro nke mkpụrụ obi hit kpọrọ ná mmalite afọ ndị 1970.
12. m na-abịa n'ụlọ - Lionel Richie
13. Homeward agbụ - Simon & Garfunkel
Simon & Garfunkel bụ ihe American ndiife nkume duo esịnede na-agụ egwú-songwriter Paul Simon na-agụ egwú Art Garfunkel.
Philadelphia mkpụrụ obi, R & B
The O'Jays bụ onye American R & B ìgwè si Canton, Ohio, kpụrụ na 1958 na mbụ esịnede Eddie Levert, Walter Williams, William Powell, Bobby Massey na Bill n'Àgwàetiti
Nkebi nke 3: Ebe ahụ ezinụlọ songs na weebụ
N'agbanyeghị na anyị depụtara ọtụtụ ezinụlọ songs n'elu, ụfọdụ n'ime unu nwere ike ịbụ na-achọsi ike-ahụ ihe. N'eziokwu, e nwere ọtụtụ ihe onwunwe na i nwere ike ime ka ọtụtụ n'ime, dị ka music saịtị na music video saịtị. N'ebe a, anyị ga-depụta ụfọdụ ndị kasị ewu ewu music na music video saịtị n'ihi na gị akwụkwọ.
Pandora bụ nnukwu internet redio na weebụ ebe ị pụrụ ịchọta a otutu dị iche iche songs
YouTube, dị ka nnukwu video saịtị na video search engine, nwere music ọwa ebe ị pụrụ ịchọta oké ọdịnaya.
Spotify bụ a music ọrụ na-enye gị ohere ọtụtụ nde songs na dị ọtụtụ mba MTV enye a collection nke music videos na kwa i nwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ niile banyere music.
Grooveshark bụ a free music ọrụ na-enyere gị aka ịchọta na-akparaghị ókè songs iji strimụ online. VEVO bụ a ịta nile di iche iche nke nwebiisinka music videos na i nwere ike ịhụ na-enuba online.
iTunes Radio bụ ọhụrụ internet redio ọrụ ndị ị pụrụ ige ntị na ọtụtụ nde songs na ịmepụta listi ọkpụkpọ. Yahoo Music bụ ihe ị pụrụ iji dị ka a search engine ka mfe chọta tọn music videos na-ekiri.
Songza na-enye gị listi ọkpụkpọ n'okpuru dị iche iche ọnọdụ, dị ka na-arụ ọrụ, atụrụ ndụ, partying na ndị ọzọ. Vimeo, dị ka a video saịtị nke dị iche iche ọdịnaya, nakwa nwere udi nke music videos n'ihi na ị na ịhọrọ site na.
Nkebi nke 4: Olee otú ibudata ezinụlọ songs maka ngosi mmịfe Ndinam
Ebe ọ bụ na i nwere ike ịhụ ndị ezinụlọ songs si dị iche iche na isi mmalite dị ka music saịtị na music video saịtị, anyị ga-agwa gị otú ị budata ha si abụọ dị iche iche na isi mmalite karị.
Mmemme mkpa ka ị download ezinụlọ songs si music saịtị-Wondershare Streaming Audio Recorder
1. akpaghị aka download online music na 1: 1 ezi àgwà
2. amamihe na-aghọta song Ama, dị ka album na nkà na ọtụtụ ihe ndị ọzọ
Olee otú iji Wondershare SAR ibudata ezinụlọ songs si music saịtị
Download a usoro si n'elu njikọ. Na-ahọrọ nri version maka kọmputa gị na-enweta ya arụnyere. Mgbe ị mepee usoro mgbe echichi, ị ga-ahụ a dị ọcha window dị ka e gosiri na nri.
Chọta Record bọtịnụ na n'elu aka ekpe nke usoro ihe omume na pịa ya iji nweta njikere. Mgbe ahụ gaa music saịtị ndị ahụ ebe ị na-ahụ oké ezinụlọ songs na-egwu music. Ka anya dị ka e nwere music na kọmputa gị, a usoro ga-amalite download gị na kọmputa.
The music ga-e dere na faịlụ MP3. Ọ bụrụ na ị mkpa iji zipu ha gị iDevices, ị pụrụ ịdị mkpa ka mbụ nyefe na iTunes. Họrọ music na pịa Tinye ka iTunes bọtịnụ na ala. Mgbe ahụ ị ga-achọta music faịlụ na iTunes na mmekọrịta gị iPhone, iPad ma ọ bụ iPod.
Mmemme mkpa ka ị download ezinụlọ songs si music video saịtị-Wondershare AllMyTube
1. Download videos si ọtụtụ video saịtị dị ka YouTube, Dailymotion, Vimeo na ọtụtụ ndị ọzọ.
3. tọghata vidiyo na ọtụtụ ndị ọzọ na formats gụnyere AVI, MOV
Olee otú iji Wondershare AllMyTube ibudata ezinụlọ songs si video saịtị
Na-ahọrọ nri version na wụnye a usoro gị na kọmputa. Ẹkedori ya mgbe nwụnye. Anyị ga na-Windows version dị ka ihe atụ.
Gaa video saịtị ịchọta ezinụlọ songs. Were YouTube dị ka ihe atụ. Mgbe ị na-egwu music video, ị ga-ahụ a Download button sere n'elu n'elu right.Click bọtịnụ na-video ebudatara. I nwekwara ike iṅomi URL nke video na pịa Paste URL button na-video ebudatara ke otu ụzọ.
Gaa Finished n'ọbá akwụkwọ ịchọta ebudatara videos. Pịa tọghata bọtịnụ na nri ma họrọ MP3 dị ka mmepụta usoro. Pịa Ok na-amalite akakabarede.
Part 5: Olee otú ime ka ngosi mmịfe na ebudatara ezinụlọ songs
Ị nwere ike emeela ọtụtụ photos maka ezinụlọ njikọghachi, mgbe ahụ, ị ​​pụrụ ime ka slideshows ọnụ na ezinụlọ songs. Ebe a bụ otú.
1. Tinye dị ọtụtụ dị ka photoes na songs na-eme ka ihe ngosi mmịfe
2. Hazie ngosi mmịfe na 480+ nkiri ekwekọghị
3. Kwado gị ịkọrọ ndị slideshows on Facebook, Twitter na ndị ọzọ
Olee otú iji Wondershare DSB ka slideshows na ezinụlọ songs
Pịa Tinye Files mbubata gị foto ma ọ bụ vidiyo banyere ezinụlọ njikọghachi ma ọ bụ ndị ọzọ.
Nzọụkwụ 2. Tinye ezinụlọ songs na foto ngosi mmịfe
Gaa na hazie taabụ na pịa Music toolbar ịgbakwunye n'okirikiri ma ọ bụ i nwere ike na-ịdọrọ ezinụlọ songs ka ndabere track. Na i nwekwara ike ịgbakwunye ndị ọzọ nkiri ekwekọghị na ngosi mmịfe.
Gaa Asuanetop taabụ iji na-enweta ihe ngosi mmịfe bipụtara. Dị ka e gosiri na foto na nri, e nwere ọtụtụ nhọrọ ị nwere ike họrọ dị ka Ọkụ ka DVD ma ọ bụ Chekwa na Computer.